नेपालका सबैभन्दा बढी कर तिर्ने प्रोफेसनलहरुः गत वर्ष कुन बैंकका सिइओले कति तलब बुझे ? – BikashNews
नेपालका सबैभन्दा बढी कर तिर्ने प्रोफेसनलहरुः गत वर्ष कुन बैंकका सिइओले कति तलब बुझे ?
२०७७ पुष २४ गते १५:५३ विकासन्युज
काठमाडौं । नेपालमा सबैभन्दा बढी तलब भत्ता बुझ्ने प्रोफेसनलहरुमा बैंकर अगाडि छन् । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हरुको तलब भत्ता तथा आर्थिक सेवा सुविधा अन्य क्षेत्रका प्रफेसनलकोभन्दा बढी भएको चर्चा हुने गर्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सबै आम्दानी र खर्च पारदर्शी हुने भएकोले पनि बैंकरको तलब तथा भत्ता सार्वजनिक हुने गरेको छ । अन्य क्षेत्रका प्रफेसनलहरुले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा गोप्य नै रहने भएकोले पनि बैंकरको आम्दानीमा सबैको आँखा लाग्ने गरेको हो ।
बैंकका सिइओहरुको तलबमा ३६ प्रतिशतसम्म कर लाग्छ । त्यसकारण यहाँ उल्लेख गरिएजति रकम उनीहरुले लान पाउने भने होइनन् । तर, बैंकहरुले भने सिइओको लागि सो बराबरको रकम तिरेको भने हुन्छ ।
बैंकहरुले प्रकाशित गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई कति रकम दिइयो भनेर उल्लेख गरिएको हुन्छ । यहाँ उल्लेख गरिएको तलब तथा भत्ता रकम गत आर्थिक वर्षभरीमा बैंकहरुले प्रदान गरेको रकम हो ।
बैंकको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले गत आर्थिक वर्षमा १ करोड ४६ लाख रुपैयाँ तलब भत्ता बुझेका छन् । यस्तै, बैंक अफ काठमाडूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्तले २ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बुझेका छन् ।
एनआईसी एसिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशनकुमार न्यौपानेलाई बैंकले गत आर्थिक वर्षमा २ करोड ५० लाख रुपैयाँ तलब भत्ता प्रदान गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको बैशाख १ गतेदेखि लागु हुने गरी माछापुच्छ्रे बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सन्तोष कोइरालाले पाएका थिए । सोभन्दा अघि माछापुच्छ्रे बैंकको सिइओ सुमन शर्मा थिए । माछापुच्छ्रे बैंकले गत आर्थिक वर्ष आफ्नो प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई २ करोड २३ लाख रुपैयाँ तलब भत्ता प्रदान गरेको छ ।
मेगा बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुपमा खुञ्जेलीलाई १ करोड ७० लाख रुपैयाँ तलब भत्ता प्रदान गरेको छ । खुञ्जेली अहिले संचालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंकमध्ये एक्ली प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महिला हुन् ।
एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले गत आर्थिक वर्षमा १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ तलब भत्ता बुझेका छन् । यस्तै, लक्ष्मी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजयविक्रम शाहलाई बैंकले १ करोड ९ लाख रुपैयाँ तलब भत्ता प्रदान गरेको छ ।
प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले गत आर्थिक वर्षमा २ करोड ५८ लाख रुपैयाँ तलब भत्ता बुझेका छन् । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिर्भन घोष दस्तियारले तलब तथा भत्ता २ करोड ८७ लाख र अन्य सुविधा १ करोड १० लाख रुपैयाँ बुझेका छन् । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशराज पोखरेलले १ करोड ३१ लाख रुपैयाँ तलब तथा भत्ता बुझेका छन् ।
ज्योति विकास बैंकले दुई अस्पताललाई दियाे बेबी वार्मर
सनराइज बैंकका ग्राहकलाई पोखराको सांग्रिला भिलेज रिजोर्टमा विशेष छुट
अब मेगा बैंकबाट ‘वीच्याट-पे’ भुक्तानी सेवा, चिनियाँ पर्यटक लाभान्वित हुने